EH-ST50 Beauty and Skin Care Products - Panasonic
အိုင်းယွန်း၏ စွမ်းအားဖြင့် ဆေးကြောပေးပြီး ရေဓာတ်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ရောက်ရှိစေပါသည်
အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးဆင်းမှုသည် အရေပြားအား စိုစွတ်နေစေရန် ဆောင်ရွက် ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိစေပါသည်။
ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်ရှိစေပါသည်
၀ါ ဂွမ်း ဖတ် ကို ထိပ် မှာ တပ် ပြီး lotion အား စုပ် ယူ သွား သည် အ ထိ စောင့် ပါ။ စက် ၏နောက် ပိုင်း ရှိ အိုင်း ယွန်း ပြား ပေါ် မှ အုပ် ပြီး စက် ကို ကိုင် ပါ။ ၀ါဂွမ်း ဖတ် ကို မျက်နှာ နှင့် ဖိပြီး နူးညံ့ စွာ ပွတ် ဆွဲပေး ပါ။ အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးဆင်းမှုသည် အရေပြားအား စိုစွတ်နေစေရန် ဆောင်ရွက် သော ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိစေပါသည်။
မျက်နှာ နှင့် လက် တို့ဖြင့် အသီးသီး ထိစပ် နေသော အဖို နှင့် အမ ၀င် ရိုး များသည် အိုင်းယွန်း များ ကို လှုပ် ရှား စေပြီး ရေငွေ့ဖြစ် ပေါ် စေပါ သည်။ ရေ ငွေ့သည် အစို ဓာတ် ထိန်းပေး သ ည့် ဓာတ် ပစ္စည်း များ ကို မာကြော သော အသားအရေအတွင်း ပိုင်း ထိ သယ်ဆောင် ပေး ပါ သည်။ ပါသည်။ EH-ST50 ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့် ပစ္စည်းများ၏ ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့်ပစ္စည်းများ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့မှုသည် လက်ဖြင့်လိမ်းခြင်းထက် 1.7 ဆ ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။*1
*1 [စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း] ပစ္စည်း - EH-ST50 / အနေအထား - ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် အနေအထား / အိုင်းယွန်းအဆင့် - မြင့်မားသော / အပူချိန် - လိုးရှင်းများနှစ်ထားသော များပြားသော /ချည်သား အချပ်များအား အသုံးပြုပြီး အရှေ့ဘက်ပုခုံးပေါ်တွင် တင်ထားပါသည်။ EH-ST50 အား အသုံးပြုသောအရ ရရှိသော စိမ့်ဝင်မှုပမာဏသည် 23.6 μp/cm² ဖြစ်ပြီး လက်ဖြင့် အသုံးပြုသောအခါရရှိသည်မှာ 13.9 μp/cm² ဖြစ်ပါသည် (aPanasonic စစ်တမ်းအရ)
*2 [စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း] ပစ္စည်း - EH-ST50 / အနေအထား - အနေအထားအားလုံး / အိုင်းယွန်းအဆင့် - မြင့်မားသော / အပူချိန် - မြန်သော / စည်းချက် - စိတ်ကြိုက် / အကြောင်းအရာများ၏ အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့်ပစ္စည်းများကို4ပတ်ကြာသည်အထိ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အသုံးပြုခြင်း [စစ်ဆေးသည့်နေရာ] ပါးများ [အကြောင်းအရာများ] အသက် 30 နှင့် 40 ရှိသော အမျိုးသမီး 10 ယောက် [သတိပြုရန်] အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်
အရေပြားကို ပင့်တင်ရန်နှင့် ပူနွေးသော နှိပ်နယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် သင့်စိတ်ကြိုက်စည်းချက်ညီညီ တုန်ခါမှုကို ရွေးချယ်ပါ
အပူချိန်ချိန်ညှိချက်2ခုနှင့် တုန်ခါမှုချိန်ညှိချက်3ခုအား စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အရေပြားသို့ ပူနွေးပြီး စည်းချက်ကျကျ တုန်ခါနေသောထိပ်အား ထိစေခြင်းဖြင့် ပင့်တင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးဆင်းမှုသည် ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပစ္စည်းများအား အရေပြားထဲသို့ ရောက်ရှိစေပါသည်။
*1 [စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း] ပစ္စည်း - EH-ST50 / အနေအထား - အနေအထားအားလုံး / အိုင်းယွန်းအဆင့် - မြင့်မားသော / အပူချိန် - မြန်သော / စည်းချက် - စိတ်ကြိုက် / အကြောင်းအရာများ၏ အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့်ပစ္စည်းများကို4ပတ်ကြာသည်အထိ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် အသုံးပြုခြင်း [စစ်ဆေးသည့်နေရာ] ပါးများ [အကြောင်းအရာများ] အသက် 30 နှင့် 40 ရှိသော အမျိုးသမီး 10 ယောက် [သတိပြုရန်] အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*2 [စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း] ပစ္စည်း - EH-ST50/ အနေအထား - ပူနွေးသောစည်းချက်လိုက် နှိပ်နယ်ခြင်း / အိုင်းယွန်းအဆင့် - မြင့်မားသော / အပူချိန် - မြန်သော / စည်းချက် - စိတ်ကြိုက် / အကြောင်းအရာများ၏ ပုံမှန်နှိပ်နယ်သည့် ခရင်မ်ထုတ်ကုန်များဖြင့် အသုံးပြုပါသည် [စစ်ဆေးသည့်နေရာ] ပါးများ [အကြောင်းအရာများ] အသက် 30 နှင့် 40 ရှိသော အမျိုးသမီး 10 ယောက် [သတိပြုရန်] အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်မျက်နှာသစ်ခြင်းဖြင့် အပြည့်အဝမဖယ်ရှားနိုင်သော အညစ်အကြေးများကို စုပ်ယူပါသည်
အဖို/အမ လျှပ်စီးကြောင်းများကို တစ်လှည့်စီပြောင်းလဲခြင်းသည် အညစ်အကြေးများကို ချည်စသို့ရောက်ရှိစေရန်အတွက် အိုင်းယွန်းဦးတည်ချက်တစ်ခုကို ရရှိစေပါသည်။
1 ဖြောင့်တန်းသောအချောင်းသည် အရေပြားအားဆွဲတင်ရန် လွယ်ကူစေပါသည်
2 နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်မှနေရာများကဲ့သို့ အသေးစိတ်နေရာများအတွက်
3 ခုံးသောမျက်နှာပြင်သည် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှနေရာများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပါသည်
ချည်သားအချပ် / အားသွင်းနိုင်ပြီး ကြိုးမဲ့ဖြစ်ပါသည်
အိုင်းယွန်းအဆင့်၊ အပူချိန်နှင့် စည်းချက်အတိုင်းတုန်ခါမှုများကို သင့်အရေပြားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်
သင့်အရေပြားအတွက် သင့်စိတ်ကြိုက်အပူချိန်နှင့် စည်းချက်အတိုင်း တုန်ခါမှုများကို ရွေးချယ်ပါ။
၀ါ ဂွမ်း ဖတ် တစ်ခုပေါ်တွင်ထည့်၍ အသုံးပြုပါ
၀ါ ဂွမ်း ဖတ် တစ်ခု အား Lotion ထဲသို့ နှစ်ထားပါ
3. အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့် အနေအထားကို ရွေးချယ်ပါ
5. ၀ါ ဂွမ်း ဖတ်ကို အရေပြားသို့သုတ်လိမ်းပါ
Cleanse mode / Moisturize mode ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ
Lotion နှင့် ဂွမ်းစ (သို့မဟုတ် မျက်နှာကပ် Mask) ကိုသာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ
ခေါင်းအား ချည်သားအကွင်းဖြင့် ချည်သားအချပ်တစ်ခုကို ပူးတွဲထားပါ။ မျက်နှာပေါ်တွင်ကပ်သော မျက်နှာဖုံးအား အသုံးပြုပါက အဆင့်3မှ စတင်ပါ။
၀ါ ဂွမ်း ဖတ်အား lotion ကို အပြည့်အဝ စုပ်ယူပါစေ။ ( ၀ါ ဂွမ်း ဖတ်အား lotionဖြင့်အပြည့်အဝ နှစ်မြှုပ်ထားသည်ကို သေချာပါစေ။)
မျက်နှာပေါ်တွင်ကပ်သော မျက်နှာဖုံးအား အသုံးပြုပါက အဆင့်3မှ စတင်ပါ။
SELECT ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး CLEANSE အနေအထား သို့မဟုတ် MOISTURIZE အနေအထားကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်၊ အိုင်းယွန်းအဆင့် (နိမ့်/အလယ်အလတ်/အမြင့််) ကိုထားပါ။
TEMP ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး အပူချိန် (နိမ့်/မြင့်/ပိတ်) အား ရွေးချယ်ပါ CLEANSE နှင့် MOISTURIZE အနေအထားများတွင် ၀ါ ဂွမ်း ဖတ် အား ကြိုတင်ပူနွေးအောင်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း မီးလင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်အပူပေးချိန် 1 မိနစ်ကြာပြီးသည်ထိ မီးလင်းနေမည်ဖြစ်သည်။
စက် ၏ နောက် ပိုင်း ရှိ အိုင်းယွန်း ပြားပေါ် မှ အုပ် ပြီး စက် ကို ကိုင် ကာ နူး ညံ့ စွာ ပွတ် စွဲ ပါ။ မျက်နှာပြင်ကို အရေပြားနှင့်ထိပြီး ဘယ်ဘက်မှပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း 1-6 သို့ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Panasonic ၏ အိုင်း ယွန်းပါ ၀င် သော သန့် စင် ချောမွေ့ စက် EH-ST50 အား အသုံးပြုနည်း